‘फायर हाइड्रेन्ट’ नहुदा आगलागीका घटनामा समस्या - नेपालबहस
‘फायर हाइड्रेन्ट’ नहुदा आगलागीका घटनामा समस्या
| १३:०१:०७ मा प्रकाशित
१ चैत,कावासोती । बजार क्षेत्रमा कुनै आगलागीका घटना घट्यो भने दमकललाई पानी खोज्दै खोलातिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । नजिकै पानी भर्न मिल्ने कुनै स्रोत नहुँदा समयमा आगलागी नियन्त्रण गर्न नसकी थप क्षति हुने खतरा रहेको छ । दमकललाई पानी भर्न मिल्ने गरी ‘फायर हाइड्रेन्ट’ नहुँदा आगलागीका कुनै घटना घटे समस्या पर्ने देखिएको छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरका मुख्य बजार क्षेत्रमा ‘फायर हाइड्रेन्ट’ बनाइएको छैन ।
जिल्लाको सदरमुकामका रूपमा रहेको कावासोतीमा समेत फायर हाइड्रेन्ट छैन । यसअघि कावासोतीको फलफूल चोकमा एउटा ‘फायर हाइड्रेन्ट’ रहे पनि प्रयोगविहीन बनेको थियो । धेरै वर्षपहिले निर्माण गरिएकाले जीर्ण भएको उक्त ‘फायर हाइड्रेन्ट’ अहिले नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारका क्रममा बाटोमा पर्ने भएपछि उखालिएको छ ।
दमकललाई पानी भर्न मिल्ने गरी प्रविधि जडान गरिनुलाई ‘फायर हाइड्रेन्ट’ भनिन्छ । ‘फायर हाइड्रेन्ट’बाट दमकलका लागि सहजरूपमा पानी निकाल्न सकिने हुँदा बजार क्षेत्रमा कुनै आगलागीका घटना घटे समयमा निभाउन सकिन्छ । बजार क्षेत्रको नजिक कमै मात्र खुल्ला पानीका स्रोत हुन्छन् । यसकारण फायर हाइड्रेन्ट बनाउनु अति आवश्यक हुन्छ ।
कावासोतीमा चाँडै फायर हाइड्रेन्ट निर्माण गरिने कावासोती खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष भीमलाल कँडेलले बताए । खानेपानीले डिपीआर तयार गर्दै गरेको र बजार क्षेत्रमा कहाँकहाँ राख्न उपयुक्त देखिन्छ सो क्षेत्रमा फायर हाइड्रेन्ट राखिने अध्यक्ष कँडेलले बताए । “हामीले हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा लिएका छौँ, कावासोतीमा करीब आठदेखि १० स्थानमा ‘फायर हाइड्रेन्ट’ बनाउने छौँ’ अध्यक्ष कँडेलले भने, “करीब छ महिनासम्ममा बनाउने योजना छ ।” कावासोती बजार क्षेत्रमा कुनै आगलागीका घटना घटे समयमा दमकलको सहायतामा पानी निकाली आगोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण होस् भनेर यसको योजना बनाएको उनले बताए ।
प्रगतिनगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले देवचुलीका चार स्थानमा ‘फायर हाइड्रेन्ट’ निर्माण गरेको छ । दुई स्थामा बोरिङबाट सहजरूपमा पानी निकाल्न मिल्ने गरी ‘फायर हाइड्रेन्ट’का रूपमा विकास गरिएको संस्थाका अध्यक्ष खिमानन्द भुषालले बताए । फायर हाइड्रेन्ट निर्माणपछि प्रयोगमा समेत ल्याइएको र यसले आगलागीबाट हुने क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ । “फायर हाइड्रेन्ट नहुँदा दमकललाई खोलातिर पानी खोज्न जानुपथ्र्यो, अहिले यहीँ भएको छ, केही मिनेटमा चाँडै पानी भर्दासमेत धेरै क्षति न्यूनीकरणमा यसले सहयोग पु¥याउँछ”, उनले भने । राजमार्गसँग जोडिएका नवलपुरका धेरै बजार क्षेत्रमा अझै पनि फायर हाइड्रेन्ट बन्न सकेका छैनन् । यसमा स्थानीय तहलेसमेत चासो दिन आवश्यक रहेको बजार क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ छ ।
राष्ट्रपतिद्धारा सर्वोच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश नियुक्त १ मिनेट पहिले
नेपाली नारी समाज पोर्चुगलको अध्यक्षमा शिवानी ६ मिनेट पहिले
मतदातासँग भेटघाटमा व्यस्त वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित पदाधिकारी ८ मिनेट पहिले
उत्पादन बढाउन भकारो सुधार अभियानमा किसान १३ मिनेट पहिले
गायिका रिनाको कस्तो माया जाल १५ मिनेट पहिले
सरकारले हठा्त अधिवेशन अन्त्य गरेपछि दलहरुसँग परामर्शमा माओवादी केन्द्र १५ मिनेट पहिले
लेकाली भेगैमा सुनिलसँग उर्मिलाको रोमान्स १८ मिनेट पहिले
सौन्दर्य पेशाको भविश्य सुनौलो छ : वरिष्ठ सौन्दर्यबिद सोनी कारंजित २३ मिनेट पहिले
दूध बिक्रीका लागि सङ्कलन केन्द्रतर्फ जाँदै महिला २५ मिनेट पहिले
शिक्षकलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि विद्यालय बन्द २६ मिनेट पहिले
चन्द्रागिरिको मुनाफामा गिरावट आएसँगै घट्यो शेयरमूल्य २९ मिनेट पहिले
मध्यपहाडी लोकमार्गको क्रसर उद्योग ३० मिनेट पहिले
व्यवसायी सम्पर्कविहीन हुदाँ कालीगण्डकी करिडोर निर्माण अलपत्र ३० मिनेट पहिले
संसदकाे चालु हिउँदे अधिवेशन अन्त्य ४१ मिनेट पहिले
चन्द्रागिरी हिल्सको मुनाफा घट्यो, ईपीएस कति ? ५ घण्टा पहिले
बेगनास तालमा पर्यटकको पर्खाइमा डुङ्गा २० घण्टा पहिले
आईएलओको पैसामा एमाले भातृसंस्थाको मस्ती, को-को परे कारवाहीमा ? ५५ मिनेट पहिले
भन्सार एजेन्ट छनौटका लागि परीक्षा मिति सार्वजनिक ४३ मिनेट पहिले
अनलाइनमार्फत सेवा प्रवाह शुभारम्भ समारोह ४ दिन पहिले
भारतमा कोराेनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या एक लाख ७० हजार नाघ्यो ७ दिन पहिले
आईपीएलः आज आरसीबी र हैदराबादको म्याच, यस्तो छ दुवैको सम्भावित–११ ५ दिन पहिले
मकवानपुरमा करेन्ट लागेर दम्पत्तीको मृत्यु ७ दिन पहिले
ओलम्पिक खेल रद्ध गर्न आग्रह ४ दिन पहिले
सेलपेको हप्ताभरी उपहार पाउने नयाँ योजना सार्वजनिक ६ दिन पहिले
नाइल नदीमा निर्माणाधीन बाँधको विवादले तीनै देशबीच तनाब सिर्जना ५ दिन पहिले
तत्काल विद्यालय बन्द नगर्न मन्त्रालयलाई प्याब्सनकाे सुझाव ७ दिन पहिले
छ दिनदेखि अवरुद्ध इन्टरनेट सेवा सञ्चालनमा ४ हप्ता पहिले
निराजनसँग निलो कुर्तामा आँचल २ हप्ता पहिले
कुलेखानी सडकखण्डमा एक महिना यातायात बन्द हुने १ हप्ता पहिले
संसदीय दलको बैठकमा भीम रावल नजाने ३ हप्ता पहिले
तीन लघुवित्तको आईपीओ आउदै, कसको कति कित्ता ? ४ हप्ता पहिले
हात्तीको आक्रमणबाट सप्तरीमा एक महिलाको मृत्यु ११ महिना पहिले
जलेश्वर नगरपालिका अनिश्चितकालका लागि बन्द ९ महिना पहिले
अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले १७१ भौतिक संरचनामा क्षति ७ महिना पहिले
नेपालमा हरेक वर्ष १२ लाख महिला गर्भवती, ४५ प्रतिशत अनिच्छित गर्भधारण गर्न बाध्य ! २ वर्ष पहिले